Struthio distribution map
S. c. camelus S. c. australis
S. c. massaicus S. molybdophanes
ငှက်ကုလားအုတ် (Struthio camelus) သည် အာဖရိကတိုက်တွင်နေထိုင်သည့် ကြီးမားသည့် ငှက်ကြီးများ ဖြစ်သည်။ ငှက်ကုလားအုတ်တို့သည် အသက်ရှင်လျက် ရှိနေသေးသော ငှက်တို့ထဲတွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ငှက်များထဲတွင် အကြီးဆုံးဥ ရှိသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်များသည် မပျံသန်းနိုင်ကြပေ။ သို့သော်လည်း လျင်မြန်စွာ ပြေးနိုင်ကြသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်တို့သည် Struthioniformes မျိုးစိတ်တွင် ပါဝင်သည်။
ငှက်ကုလားအုတ်ကို ပျံနည်းမေ့သောငှက်ဟု အမည်ပေးလျှင် မှားမည်မဟုတ်ချေ။ ငှက်ကုလားအုတ်တွင် ရှိသော တောင်ပံ တို့မှာ အလွန်သေးငယ်ကြသဖြင့် အခြားငှက်များကဲ့သို့ လေထဲ၌ မပျံသန်းနိုင်ချေ။ သို့ရာတွင် သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်အခါက ထိုငှက်မျိုးတွင် သန်စွမ်းသော တောင်ပံများရှိသဖြင့် လေထဲတွင် အခြားငှက်များနည်းတူ ပျံသန်းနေကြမည်ဟု တွေးတောရပေသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်သည် အကောင်ကြီး၍ အလွန်သန်မာသဖြင့် နှောင့်ယှက်မည့်ရန်သူ နည်းပါးသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အစာရေစာကို ခရီးဝေးသို့ သွားရောက်မရှာမဖွေရဘဲ လွယ်လင့်တကူ နှင့် ရနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အတောင်ပံများကို အသုံးနည်းလာသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယခုအခါ မပျံသန်းနိုင်တော့ဟု ယူဆရလေသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်သည် ပျံသန်းနည်းကို မေ့ပြီဟုဆိုရ မည်ဖြစ်သော်လည်း အလွန်သန်မာ တောင့်တင်းသော ခြေများ ရှိသဖြင့် အပြေးမြန်သော အာရပ်မြင်းကိုပင်ကျော်အောင် ပြေးနိုင်လေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယခုအခါ၌ တွေ့သော ငှက်တို့တွင် ငှက်ကုလားအုတ်သည် အကြီးဆုံးငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်နှင့် အာရေဗျနိုင်ငံတွင်ရှိသော သဲကန္တာရများသည် ငှက်ကုလားအုတ်တို့၏ မူလ ကျက်စားရာဒေသ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသဲကန္တာရများတွင် ငှက်ကုလားအုတ်များကို မြင်းကျားနှင့် အန္တိလုပ်ခေါ် တောဆိတ်အုပ်များထဲ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရတတ်သည်။ အများအားဖြင့် ငှက်ကုလားအုတ်များသည် အဖိုတစ်ကောင်နှင့် အမ ၅ ကောင်မှ ၆ ကောင်အထိ ပါဝင်သော အုပ်များဖွဲ့၍ နေလေ့ရှိကြသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်တွင် တောင်ပံနှင့် အမြီးဟူ၍ မည်မည်ရရ မရှိချေ။ ကျောကုန်းကလည်း မို့မောက်နေသည့်အပြင် ရှည်လျား၍ ကောက်နေသော လည်တံသည်လည်း အထက်သို့ ထိုး ထွက်နေ၏။ ထို့အပြင် သန်မာသောခြေတံရှည်များကြီးများ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ငှက်ကုလားအုတ်ကို တကိုယ်လုံးခြုံ၍ကြည့်လိုက်လျှင် ငှက်စင်စစ်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုသာနိုင်အောင် အဆစ်အပိုင်းများ ပြေပြစ်ချောမောခြင်း မရှိချေ။ အရွယ်ရောက်သော ငှက်ကုလားအုတ်ဖို၏ အရပ်အမောင်းမှာ အရပ်ရှည်ရှည် လူတစ်ယောက် ထက်ပင် မြင့်မားသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်သည် ခြေဖျားမှ ဦးစွန်းတိုင်အောင် ၇ ပေမှ ၈ ပေအထိ ရှိ၍ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ပေါင် ၁၅ဝ မှ ပေါင် ၃ဝဝ အထိ ရှိသည်။ ငှက်အဖို၏ ကိုယ်မှာ မည်းနက်သော အမွှေးအတောင်တို့ ဖုံးအုပ်နေသည်။ အလွန်သေးငယ်သော အတောင်ပံနှင့် အမြီးတို့မှာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသည်။ တောင်ပံမွှေးနှင့်အမြီးတို့မှာ အလွန် လှပသဖြင့် လူတို့သည် ဈေးကြီးပေး၍ ဝယ်ယူသုံးစွဲကြသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်၏ ထူးခြားချက်တရပ်မှာ ခြေချောင်း ၂ ခုသာ ပါရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နေရင်းအရပ်ဖြစ်သော သဲကန္တာရပေါ်တွင် အလွန်မြန်စွာပြေးနိုင်သော ခြေဖဝါးများ ရှိသည်။ လမ်းလျှောက်နေသည့်အခါ ငှက်ကုလားအုတ်သည် လူများဟန်လုပ်၍ လှမ်းသကဲ့သို့ တစ်လှမ်းချင်း စိပ်စိပ်နှင့် မှန်မှန်လှမ်း၍ သွားတတ်သည်။ ပြေးရမည်ဆိုလျှင် တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၃ဝ ကျော်နှုန်းဖြင့် ပြေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်မတို့တွင် ညို မှိုင်းမှိုင်း အမွှေးအတောင်ရှိ၍ အဖိုတို့လောက် အရပ်မမြင့်ချေ။ အဖိုတို့ထက် အမများသည် စိတ်ကောင်းပို၍ ရှိလေသည်။ အဖိုတို့သည် အမများ ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် မြူရာမှအစ အချင်းချင်း သတ်ပုတ်တတ်ကြသည်။ အမများသည် သဲကို ယက်ကော်ထုတ်ထားသော အသိုက် ကျင်းတစ်ခုထဲ၌ ၅ ကောင်ဖြစ်စေ၊ ၆ ကောင်ဖြစ်စေ ဝိုင်း၍ အုချကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အမတစ်ကောင်က နေ့အခါ၌ ဥများပေါ်တွင် ဝပ်လေ့ရှိ၏။ သို့သော် အများအားဖြင့် အမတို့သည် ဥများကို အုချပြီးနောက် အကောင်များ ပေါက်လာအောင် ဂရုတစိုက်နှင့် ဥများပေါ်တွင် ဝပ်နေလေ့ မရှိကြချေ။ သဲကန္တာရတွင်း ဖြစ်သည့်အလျောက် နေပူရှိန်ပြင်းပြလွန်း၍သာ ဥများမှ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာကြလေသည်။ အမအများပိုင် ဥကျင်းတစ်ကျင်းထဲတွင် ဥပေါင်း၂ဝ ကျော် ၃ဝ အထိ ရှိတတ်သော်လည်း ပေါက်ခါ စငှက်ကလေးတို့အား ဥများကိုခွဲ၍ ကျွေးမွေးလေ့ရှိသဖြင့် တမြုံတွင် အကောင်လေးပေါင်း ၂ဝ ထက်ပို၍ မရှိကြချေ။ ညတွင် အစာရှာထွက်လေ့ရှိသော ခွေးအကဲ့သို့ သားရဲတို့၏ ရန်ကို စိုးရိမ်ရသဖြင့် ငှက်ကုလားအုတ်အဖိုသည် ဥများပေါ်၌ တညလုံးဝပ်၍ စောင့်ရှောက်လေသည်။ ငှက်ကုလားအုတ်ဥသည် ကြက်ဥထက် ၁၈ ဆခန့် အရွယ်ရှိ၍ ဥတစ်လုံးတစ်လုံးလျှင် ၃ ပေါင်ခန့် လေးသည်။ ဥများမှာ စားကောင်းသော်လည်း မိနစ် ၄ဝ မျှကြာအောင် ပြုတ်မှ ကျက်သည်။
↑ BirdLife International (2018). "Struthio camelus". IUCN Red List of Threatened Species 2018. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်ကုလားအုတ်&oldid=710467" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။